Trade Order Types - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeForex SchoolTrade Order Ụdị
Nke a bụ isiokwu na ọtụtụ nkịtị iji ụdị dị ka MT4 n'elu ikpo okwu na otú iji ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị ga-enyocha ná mkpirikpi ndị na-esonụ iji ụdị:
Market Order (ozugbo imepụta na Close Order)
Kwụsị Order (Buy Kwụsị, Ree Kwụsị)
Ịgba Order (Buy Ịgba Order, ere Ịgba Order)
Standard-eche nche na: Kwụsị Loss na Were Uru
Anyị ga-egosi na usoro na ihe mere maka iji ọ bụla ụdị, tinyere ha uru na ọghọm.
A ahịa iji, ndị kasị ụdị nke iji, na-eji mgbe ị chọrọ igbu iwu ozugbo na ahịa price, nke bụ ma ndị egosipụta"Ikele" or "Ịjụ" price na gị na ihuenyo. Ọ bụrụ na ị na-aga ịzụta a ego ụzọ, ị ga-azụta ke "Ịjụ" price, na ọ bụrụ na ị na-aga na-ere a ego, ị ga-ere na "Ikele" price.
NDỤMỌDỤ: All iwu pụrụ enịm ke ọtụtụ ụzọ
Ị nwere ike pịa ma ọ bụ ugboro abụọ nri pịa a ego ụzọ na Market Watch window.
Ị nwere ike iji Tools / New Order.
Ị nwere ike pịa F9
Ị nwere ike nri-pịa na akwụkwọ ego chaatị, Trading / New Order.
emekarị na STP or ECN ndị na-ere ahịa, ihe ndị ị na-ahụ na-agbakwasị gị dị ka ọnụahịa ndị a na-enyocha (nhọrọ kachasị mma na inye) nke anakọtara site na 10 ma ọ bụ karịa bank. Ọ bụrụ na ị kpebie imepe ma ọ bụ mechie ọnọdụ, a ga-egbu usoro gị na ọnụahịa kacha mma dị na ahịa ahụ kpọmkwem site na ndị na-enye ego.
Dabere na otú ihe ore guzobere ha egbu technology, gị ahịa iji a ga-eme ka a ma onye nzi imepụta or Market imepụta. Olee ihe dị iche? Ntabi egbu ore -enye ohere ka ị na-edebe ihe nkwụsị ọnwụ ma na-uru n'otu oge dị ka a gị ahịa iji, ebe a ahịa egbu ore nwere ị na-edebe a ahịa iji naanị, na-enweghị onye mbụ nkwụsị ọnwụ ma na-enweta ego. Naanị mgbe iji e gburu i nwere ike na-aga azụ ma gbanwee ihe iji na-agụnye a stop ọnwụ ma na-enweta ego. Olee otú ị pụrụ ịgwa ha iche? Mgbe ị mepee ahịa iji window, ị nwere ike ngwa ngwa ịnọ na ọdịiche.
Market Order ka nzi imepụta:
Ị pụrụ ịhụ n'ebe a window nhọrọ gbanwe oke, ya bụ, otú ọtụtụ nza ị chọrọ ahia (a ka ihe atụ, 0.01 = 1 Micro otutu), otu nhọrọ gbanwee na nkwụsị ọnwụ ma na-uru (mbụ enyere anyị aka ịmata), na nke N'ezie, ọ na-ekwu ngwa ngwa nke imepụta na Type ubi (nke abụọ, ọzọ doro anya enyere anyị aka ịmata). Inwe ike na-egosi gị nkwụsị ọnwụ ma na-uru n'otu oge dị ka gị iji pụrụ ịbụ nnọọ kemfe. Ọ na-azọpụta gị nsogbu nke na-agbakwunye ha na mgbe e mesịrị, nke ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na nwere a ahịa egbu ụdị ore. Ndị ọzọ na atụmatụ nke ahịa iwu na-atụle. Na n'elu ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-aga ịzụta a ego ụzọ, ị ga-azụta ke ịjụ (Buy) price, nke ị nwere ike iji anya nke uche dị ka-acha anụnụ anụnụ Buy igbe, na i nwekwara ike ịhụ nke a price dị ka-acha anụnụ anụnụ akọrọ chaatị ke chaatị window. Ma ọ bụrụ na ị na-aga na-ere a akwụkwọ ego, ị ga-eresị na ikele (Ree) price, nke ị nwere ike iji anya nke uche dị ka red Ree igbe, na i nwekwara ike ịhụ nke a price dị ka red akọrọ chaatị. Rịba ama nwekwara ihe i nwere ike inwe ike kacha ndiiche si hotara price. Ọ bụrụ na ị gosiri 5 pips dị ka gị chọrọ ndiiche, mgbe ahụ, dị ka ukwuu nke gị iji dị ka o kwere ga-ejupụta ọ dịghị ihe karịrị 5 pips site ugbu a. Ọ bụrụ na ndị price na mberede na-akpali ihe karịrị nke ahụ, ka-agaghị jupụtara. The uru ebe a bụ akara nke slippage na Price n'aka.
Market Order ka Market imepụta:
Previous, anyị na-ele otú ozugbo egbu ore na-enye ikike iji tinye a nkwụsị ọnwụ ma ọ bụ na-uru n'akụkụ ahịa wee. The uru iji na usoro bụ ọsọ na mma. N'elu bụ ihe atụ nke a ahịa egbu ore nke na-enye gị ohere ka ị na-etinye usoro ahịa, n'enweghi ike iji oge ịkwụsị ma ọ bụ were uru. Rịba ama otú nkwụsị nkwụsị ma were igbe ego bara uru, nke pụtara na ị nwere ike iji ha na ahịa ahịa. Ntughachi ọzọ maka ụdị a ore bụ na i nwere ike ịtọ kacha ndiiche na pips si hotara price ị chọrọ igbu na. Uru ụdị ore bụ na ha na-adịkarị jikọrọ aka a STP or ECN technology na ụzọ gasị na iji ozugbo na nke kacha mma ikele / ịjụ ahịa nke liquidity na-eweta, kama ahịa onye rụrụ ore -ewere dị n'akụkụ nke ọzọ nke ahia na N'ihi anapụta erughị ezigbo ahịa ma ọ bụ egbu gbapụrụ ọsọ.
Uru ka Market iwu (ma nzi ma ọ bụ ahịa egbu)
A ahịa iji choo ozugbo egbu, na nke a bụ ezi mgbe ị maa chọrọ ịbụ na ahia ugbu a, N'egbughị oge.
N'ihi na immediacy-egbu dị ezigbo mkpa, ahịa iwu ndị kasị ewu ewu ụdị na-abanye trades.
N'ihi na nke liquidity nke Forex, ahịa iwu n'ozuzu na-ejupụta na gị hotara ikele na-ajụ ahịa, na nke kacha nta slippage, re-quote na njehie.
Cons na-Market iwu
Mgbe ụfọdụ a ahịa iji ike nakwa na ọ na-ata ahụhụ site na slippage na re-quote n'oge oké obodo oge, dị ka na-ewere ọnọdụ n'oge dị oké egwu, ozi ọma mara ọkwa. Ị nwere ike re-hotara na price, dịghị abụkarị n'ihi na ore na-agbalị ụma achọ n'aka gị, ma n'ihi na ugbu a ahịa price nwere ike ịbụ na ngwa ngwa gbanwere ebe ọ bụ na nke ikpeazụ ahịa snapshot.
Cool Scripts Iji Mepee Market iwu Ọsọ ọsọ:
Ị nwere ike iri uru nke a ọnụ ọgụgụ nke scripts na ike izipu gị ahịa iji si gị MT4 ngwa ngwa karịa mmalite iwu window igbe na aka inputting gị chọrọ olu, kwụsị ọnwụ na-ewere uru price etoju. Steve Hopwood kere a zụta na-ere ahịa iji scripts na-ekwe ka gị mfe hazie a ole na ole ndị ọzọ ihe gị ntuziaka ahịa iji, na mgbakwunye na mma nke na-adị mfe na-adọkpụpụta edemede gafee gị chaatị window igbu ahịa iji:
Nịm ọtụtụ size
Nịm nkwụsị ọnwụ ma na-uru, dị ka ma price ma ọ bụ pips
Nịm anwansi nọmba
Market Close: emechi Trades Mgbe Market
Emechi a ahia na ahịa bụ ndị kasị ụzọ nke exiting gị ahia n'egbughị oge.
Iji mee otú ahụ, i kwesịrị iji mezie pịa na-emeghe iji si n'ime-enweghị Ngwọta, na họrọ nso Order.
The igbe na-egosi na anya nke ukwuu dị ka ngwa ngwa imepụta Box, ma ugbu a, e nwere a pụta ìhè igbe na-acha odo odo na-akpọ Close #xxxxx ịzụta 0.04 EURJPY na 112.1000. The hotara nso price bụ nke e hotara ikele (ere / red) price ma ọ bụrụ na na-emeghe iji bụ a Buy, na ọ na-ahụ e kwuru okwu na-arịọ ndị (ịzụta / acha anụnụ anụnụ) price ma ọ bụrụ na na-emeghe iji bụ a na-ere. Ọ bụrụ na ị pịa a odo mmanya, gị tiketi iji ga-kama emechi na nke ugbu a ahịa price. Nke a hotara nso price-eme mmelite ọ bụla nke abụọ na ọhụrụ ahịa, otú i nwere ike na-ya-emeghe ka ahịa ịkwaga n'ebe ị chọrọ tupu ị pịa mmanya.
Cool Scripts Iji Mechie Trades Ọsọ ọsọ:
Ị nwere ike iri uru nke a ọnụ ọgụgụ nke scripts na ike imechi iwu gị, ngwa ngwa karịa ma ọ bụghị. Ịdọrọ scripts n'okpuru si scripts nchekwa n'elu ka chaatị window imechi si gị trades na-etoju ị chọrọ.
Pipsing_Close_on_Drop.mq4 Nice! Idebe script nso emeghe ahia na chaatị (ọ ga-hụrụ dị ka a kwụ green kụriri akara).
Close_all.mq4 Emechi niile trades.
CloseAtEquityAmount_v1.0_Above.mq4 Emechi trades mgbe hara nhatanha> X
CloseAtEquityAmount_v1.0_Below.mq4 Emechi trades mgbe hara nhatanha <X
CloseTrades_After_Account_Loss_TooMuch.mq4 Na-emechi ahịa ma ọ bụrụ na ọnwụ na-ese n'elu -> X
CloseTrades_After_Account_Loss_Percent.mq4 Emechi trades na a na ọnwụ percent
CloseTrades_AfterAccount_Profit_Percent.mq4 Closes trades na uru percent
rue mgbe iwu
N'ụzọ dị iche na ahịa iwu guzo rue mgbe iji, na iji na ị chọrọ jupụta na a kpọmkwem price, na-atụ ma ọ bụ azụ ahụ ị chọrọ direction.
E nwere ihe abụọ na ụdị rue mgbe iwu: kwụsị iwu na ịgba iwu.
Rue mgbe nkwụsị ma ọ bụ ịgba iwu ịbịa n'ụdị nke Ndenye na-akpọ jide stop entry iji ma ọ bụ rue mgbe stop ịgba iji. Kwụsị entry iwu na-iwu ka jupụta na-atụ gị bu n'obi price direction (iji gosi na price direction), na-amachi entry iwu bụ iwu ka jupụta backward na nwa oge retracement gị bu n'obi price direction (ịbanye na mma price).
kwụsị na ịgba iwu nwere ike ịbịa n'ụdị dịka ọpụpụ. Ọpụpụ nkịtị, Kwụsị Loss, Bụ a rue mgbe stop iji, mgbe Were Uru bụ a rue mgbe ịgba iji. Anyị ga-enyocha ndị a mgbe ekpuchi rue mgbe entry iwu.
Kwụsị Entry iwu
A na-akwụsị iji bụ ihe iji zụta ma ọ bụ na-ere a ego mgbe ya price karịrị otu isi, iji hụ na a ukwuu puru nke ọbọ a gaghị agara ntinye ma ọ bụ ụzọ ọpụpụ price. Ozugbo price karịrị ndị predefined entry / ụzọ ọpụpụ, ndị na-akwụsị iji na-aghọ a ahịa iji.
A ịzụta-akwụsị iji bụ a rue mgbe Buy iji zụta na ego ụzọ na a kpọmkwem elu price.
A ere-akwụsị iji bụ a rue mgbe na-ere iji na-ere ego ụzọ na a kpọmkwem ala price.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke a Buy stop iji na-banye na MT4:
Na ebe a na atụ m na-egosi na Type ubi na ọ bụ a Pending Order, kama ihe ngwa ngwa nke imepụta, na ugbu a na e nwere ubi parameters maka Pending Order, dị ka Ụdị (na atụ m gosiri Buy Kwụsị), na price ( na atụ m setịpụrụ na 1.2838), na Mmebi (na anaghị m na-egosi ihe Mmebi ma ọ bụ kemfe iji ma ọ bụrụ na m na-achọghị ka nwere a ịzụta Kwụsị adịru mgbe ebighị ebi). Na akọrọ chaatị bụ n'aka ekpe, m ẹkedọhọde Buy stop ntinye uche-egosi dị ka a na agba ntụ akara 10 pips n'elu ugbu a ikele (acha anụnụ anụnụ) quote price. The ahịa esịmde ruo na price m jupụtara 0.01 Micro nzà.
Kwụsị iwu ndị a mma usoro iji n'ihi na trading breakouts. Ka ihe atụ, na-eji ihe atụ n'elu, m nyere ndị EURUSD Buy stop iji nke 1.2838 dị n'elu ikpeazụ elu nke ahịa n'ihi na m na-eche na ọ bụrụ na ọ etịbede a na-eguzogide larịị, ọ pụrụ ịnọgide na-ahia elu, na m chọrọ ịbụ na na ọrụ a na-agbasa ebe.
Na-eme ka n'aka na ị na-na na na ahia mgbe ọ na-akpụ akpụ na gị na-atụ anya direction
Good maka akụta breakouts
N'ihi na ahịa nwere na-akpali a ụzọ elu ma ọ bụ ala unu na-abanye na ọnọdụ, e nwere ihe ize ndụ nke gị na-abanye na njedebe nke a na-agba ọsọ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ mgbe
E nwere ọtụtụ ihe ndị ahịa na-amasị-agwụ breakouts, nke pụtara na ha na-etinye ịgba iwu na onye na-abụghị direction gị nkwụsị iwu, na-enwe olileanya na-eguzogide ma na-akwado na-esetịpụ kama oge izu
Ịgba Entry iwu
A ịgba iji etinye mgbe ị na-na njikere tinye a ọhụrụ ọkwá ma ọ bụ wepuÚ a ugbu a ọnọdụ na a kpọmkwem price ma ọ bụ mma. The ịgba iji, na-ezu ike n'okpuru ahịa nke a Buy, ma ọ bụ n'elu maka a na-ere, ga na-jupụtara ma ọ bụrụ na ahịa trades na na price ma ọ bụ mma.
A amachi-izu iji bụ a rue mgbe iji zụta na ego ụzọ na a kpọmkwem ala price.
A ịgba-ere iji bụ a rue mgbe iji na-ere ego ụzọ na a kpọmkwem elu price.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke a ịgba-Buy iji na MT4:
M'tiyeworo Buy Ịgba iji nke 1.2858, 7 pips n'okpuru ugbu a ahịa Buy price nke 1.2866. M na-atụ ahịa creeps a obere ala nye m jupụtara iji nweta a 7 pip uru na gaba n'iru aga. Ọ bụrụ na m chọrọ obere ahia, na m ga na-ere ịgba enịm n'ebe ọ bụla n'elu hotara na-ere price na-uru nke a mma price on a n'ala aga.
Mma maka ejupụtanụ na mma ahịa karịa ahịa ma ọ bụ na-akwụsị iwu.
Good maka aṅacha na breakouts
Agbaghara ohere: Mgbe ụfọdụ, ihe price adịghị eru elu ma ọ bụ ala ka gị na ịgba iji, na ị na-atụ uche na-agba ịnyịnya mgbe ahịa aga ike na ihu ọma nke ị chọrọ direction.
Etinye gị na-ere ma ọ bụ zụta ịgba na a larịị nke na-eguzogide ma ọ bụ nkwado nwere ike izute na nsogbu mgbe ndị na-etoju agbaji. Ị ga-esi otú abanye a ọnọdụ mgbe ahịa na-emekarị na-akpụ akpụ na-emegide gị.
Nkọwa nke Cool Iji Tinye Echere Ntinye akwụkwọ ọsọ ọsọ:
Kasị jide entry iwu na-meghere via ka window na a 5 nzọụkwụ usoro:
Họrọ Type: Pending Order
Họrọ Type: Zụrụ Ịgba, Ree Ịgba, Buy Kwụsị, Ree Kwụsị
Họrọ Specific Price
Usoro a nwere ike na-a ole na ole sekọnd, ma ekele na e nwere scripts nwere ike ịtụ rue mgbe iwu ngwa ngwa.
M na-agba ọsọ gafee a jụụ script na ike tinye gị nkwụsị ntinye ma ọ bụ ịgba entry iwu ukwuu karịa ọkọlọtọ ụzọ. Ị dị nnọọ ịdọrọ script n'okpuru si scripts nchekwa n'elu ka chaatị n'elu ma ọ bụ n'okpuru nke ugbu a price, dabere ma ọ bụrụ na ị chọọ rue mgbe ụdị ị chọrọ ka ọ na-:
DROP_PENDING_BUY Idebe n'elu price maka a Buy na-akwụsị, n'okpuru price maka a Buy ịgba
DROP_PENDING_SELL Idebe n'okpuru price maka a na-ere na-akwụsị, n'ihi price maka a na-ere ịgba
DROP_MOVE_PENDING_PRICE Idebe n'elu / n'okpuru price ịkwaga nkwụsị / ịgba mgbe ahụ
Standard-eche nche na: Kwụsị Loss Ma Were Uru
The nkwụsị ọnwụ na-ewere uru bụ abụọ kasị iche nke rue mgbe exits na ha na-na-wuru n'ime ọtụtụ trading nyiwe dị ka customizable ntinye.
Dị mwute ikwu na iji window igbe nke MT4 ngosipụta kwụsị ọnwụ na-ewere uru dị ka customizable price etoju (bụghị pips). Ọbụna mgbe ị chọrọ gbanwee otu dị na SL ma ọ bụ TP, ọ nwere na-eme site na price (bụghị pips). Ọzọkwa, ọ na-ewe dịkarịa ala ole na ole nzọụkwụ ịbanye na gbanwee SL na TP, nke nwere ike ịbụ sekọnd kwa ngwa ngwa na a ngwa-ngwa na-akpụ akpụ ahịa.
Ọ dabara nke ọma, e nwere scripts ka a ụzọ dị iche iche nke na-agbakwunye SL ma ọ bụ TP (dị ka price na pips na òké tụlee) na ukpụhọde ha ẹdude etoju na ada, site abụọ na ịpị SL ma ọ bụ TP kwụ edoghi na-adọkpụpụta ha elu ma ọ bụ ala.
Kwụsị Loss: Iji Kwụsị iwu ka exiting Trades
Kwụsị iwu na-ejikarị na-amachi losses. Otu n'ime ụzọ kasị dị irè nke na ịmachi gị losses bụ site a tupu kpebisiri nkwụsị n'usoro,-akpọkarị a stop-ọnwụ.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke a Buy nkwụsị iji na-eji na njikọ na a nkwụsị ọnwụ.
Ka i si hụ, M nwere a Ịzụta Kwụsị Order na price nke 1.2837, dị nnọọ elu karịa nke ikpeazụ dị elu, ma ọ na-egosi dị ka a na agba ntụ akara na akọrọ chaatị, 4 pips n'elu nke ugbu a Buy price. M kwukwara ihe gosiri a na-akwụsị ọnwụ nke 1.2827, nke na-egosi dị ka a red akara na akọrọ chaatị, 10 pips n'okpuru m Buy nkwụsị iji. N'ihi ya, ọ bụrụ na ahịa na-akpali elu na jupụtara n'ime m na 1.2837, m na-akwụsị ọnwụ ga-abụ na 1.2827, na agaghị m atụfu ihe karịrị 10 pips na na ahia.
Ọ bụrụ na gị ahia na-aghọ uru site a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke pips, ọ bụ n'ozuzu a ezi echiche na-akpali gị na-akwụsị ọnwụ na uru direction iji chebe ụfọdụ nke gị uru. On a uru ogologo ọnọdụ ị pụrụ ịkpali gị kwụsị breakeven ma ọ bụ uru mpaghara, iji chebe ya megide ohere nke a ahịa nloghachi megide gị ugbu a na uru ọnọdụ. Ịchọpụta uru fọrọ n'ihi na mgbe ị kwesịrị ịkpali gị nkwụsị ọnwụ iji chebe gị n'ọkwá ma ọ bụ uru bụ tricky akụkụ, n'ihi na ị na-achọ na-ekwe ka gị na ahia nwere ụlọ na-eku ume, na-free ofufe kama nká exiting na ihe na-adịghị mkpa mgbazi .
Were Uru: Ịgba iwu ka exiting Trades
Dị nnọọ ka ọ bụ ezi echiche iji nwere a nkwụsị ọnwụ iji na ebe tupu ịtụkwasị gị ahia, ọ bụ ihe dokwara ezi echiche nwere a uru iche na ebe. A ịgba iji na-enye ohere ị wepuÚ ahịa na gị tupu set uru ebumnobi, na-akpọ a Were Uru.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, m nwere Buy Ịgba iji ẹkenịmde ke price nke 1.2873, pụtara dị ka a na agba ntụ akara (na Entry na ya) 3 pips n'okpuru ugbu a Buy see okwu. M na-etinye a predefined Kwụsị Loss nke 1.2871, pụtara dị ka red akara (na SL na ya), 2 pips n'okpuru m bu n'obi ntinye, na a Were uru nke 1.2878, pụtara dị ka a-acha anụnụ anụnụ akara (na TP na ya). N'ezie, otu onye ga-ahụ yiri ntinye ịgba, na-akwụsị na zaa enịm nso ọnụ, m na-eri ha iji gosi gị otú ha ga-egosi na akọrọ chaatị.
Cool Indicators Iji Tinye Na Gbanwee Kwụsị Loss Ma Were Uru Ọsọ ọsọ:
Agbakwụnye, ma ọ bụ ịgbanwe a nkwụsị ọnwụ ma ọ bụ iri uru na MT4 nwere ike were nzọụkwụ ole na ole na sekọnd. Ọzọkwa, mmezi niile a na-eme site na ọnụahịa naanị ya, nke nwere ike itinye oge na-egbu oge ka onye na-agba mbọ ịpịgharịa gaa ọnụahịa ahụ. Obi dị m ụtọ na e nwere ederede ị nwere ike ịbanye iji tinye ma ọ bụ gbanwee nkwụsị ịkwụsị gị ma ọ bụ were uru iwu ọtụtụ ngwa ngwa, na ọtụtụ ụzọ: dịka ego, pips na ọkpụrụkpụ dọrọ / dobe ego.
Market ogologo site Steve.mq4 Mepụta ogologo ahịa iji, na ka SL & TP ka ma price ma ọ bụ pips; nwekwara ike ịgbakwunye anwansi nọmba na comment
Market obere site Steve.mq4 Mepụta obere ahịa iji, na ka SL & TP ka ma price ma ọ bụ pips;
nwekwara ike ịgbakwunye anwansi nọmba na comment
modify_stops_DragDrop.mq4 Tinye & gbanwee akwụsị idebe uzo nke chaatị
modify_take_profits_DragDrop.mq4 Tinye & gbanwee ahụ uru idebe uzo nke chaatị
e-MoveSLTPbyMouse.mq4 Gbanwee ẹdude SL & TP site abụọ na ịpị & adọkpụpụta SL & TP kwụ edoghi
Wepụ stop losses.mq4 Ewepu niile akwụsị nke niile ẹdude na-rue mgbe trades
Ozugbo ị matara ihe dị iche iche nke iwu (ahịa, na-akwụsị, ịgba), ma na-ala iji ha, i nwere ike mma mezuo ebumnobi gị nke otú kacha mma tinye na wepuÚ ahia. E nwere uru na ọghọm nke ọ bụla iji ụdị na ndị a nwere ike na-mụtara site omume. Ịmara na iji ụdị na-na na otú, ọ dịghị aka na ebe na mgbe - nke ga-ruo gị analysis ma ọ bụ atụmatụ iji chọpụta. Na njedebe, ị pụrụ ahọrọ otu ụdị egbu n'elu ndị ọzọ, ma ọ bụ i nwere ike jiri a mgbanwe Nchikota iji ụdị ikwu na ahịa ọnọdụ.
Ịzụta Kwụsị Order
Ozugbo imepụta Box
Market Close: emechi Trades na Market
Kwụsị Loss: Iji stop iwu ka exiting trades
Were Uru: Ịgba iwu maka exiting Trades